China Mobile ekwentị ngwa akpa ụlọ ọrụ na-emepụta | Hong Bang
Akpa mkpọchi mkpọchi bụ ụdị nkwakọ ngwaahịa kachasị ewu ewu nke ahịa n'ihi na ụdị nkwakọ ngwaahịa a bara uru yana bara uru yana mara mma. Dị ka aha ya na-egosi, akpa ndị a na-enwe ike ebili na elu ọ bụla siri ike. Ọ nwere ikike ngosipụta dị ukwuu ma ha nwere ike ibelata mkpa nchekwa na ịchekwa ohere nchekwa. Ọtụtụ mgbe, na-ebili obere akpa tumadi iji na nri, nanị, ọla, tii ma ọ bụ kọfị, nkịta nri, Pet nri ， na ekwentị ngwa nkwakọ.
Njirimara nke Akpa Ziplock
A na-arụpụta nri nri anụ ụlọ Pet nri dị iche iche site na ọtụtụ ngwongwo nke ihe mgbochi nwere ike ịkekọrịta n'ime ndị isi atọ, nke na-ezukọta iji nye obere akpa ahụ njirimara na-adịgide adịgide ma na-agba ume. Ndị otu a bụ:
Nchedo na ogo dị elu ga-abụ ụkpụrụ mbụ anyị. A na-eme ngwaahịa anyị niile site na nri nri nke pụtara na ihe nkiri anyị na-eji, ink na akara nke mmepụta bụ nchekwa 100% maka okenye ọ bụla ọbụlagodi nwatakịrị. Ọzọkwa, anyị siri ike na nke pụtara enweghị nnagide maka ụdị nkwekọrịta ọ bụla na-egosi na nrụpụta siri ike, ikuku ikuku na mbipụta doro anya. Nkwakọ ngwaahịa siri ike na egwuregwu zuru oke na ọchịchọ ndị ahịa ga-abụ ebumnuche anyị.
Njirimara nke Iguzo Ziplock Bag
Prosì Ihe Akaebe
Ihe Ngosipụta ìhè
N'èzí Enyi na Enyi
Light arọ na Portability
Ọ dịghị adịzi Game Easy Guzosie
Bpa, ndu, Pvc, phthalate-free
Nke gara aga: Akpa nri anụ ụlọ
Osote: Pout akpa